नेपाली चलचित्र Archives - Lokpati.com
Tag - नेपाली चलचित्र
‘घामड शेरे’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियाे)
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘घामड शेरे’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।
सार्वजनिक ट्रेलरमा चलचित्रका मुख्य कलाकार निश्चल बस्नेत, स्वस्तिमा खड्का लगायत फिचर्ड छन् ।
निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको संघर्षको कथा ट्रेलरले भनेको छ ।...
चलचित्र ‘जीवन काँडा कि फूल’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियाे)
काठमाडौं, १० भदाै। चलचित्र ‘जीवन काँडा कि फूल’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा मङ्गलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्माण पक्षले चलचित्रको ट्रेलर र सिनेमाघरमा आउँने मिति सार्वजनिक गरेको हो ।
चलचित्र सिनेमा घरमा...
‘हजार जुनीसम्म’ काे ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियाेसहित)
काठमाडौं, १० साउन । नेपाली कथानक चलचित्र ‘हजार जुनीसम्म’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । विकास आचार्य निर्देशित पारिवारिक प्रेमकथामा आधारित चलचित्र ‘हजार जुनीसम्म’को ट्रेलर शुक्रबार रिलिज गरिएको हो ।
‘डा. सिके राउत’ नामक फिल्म बन्दै : मूख्य भूमिकामा को–को ?
काठमाडौं। विखण्डनवादी आन्दोलन छाडेर अखण्डतावादी राजनीतिमा प्रवेश गरेका मधेशवादी नेता डा. सिके राउतको जीवनमाथि नेपाली चलचित्र निर्माण हुने भएको छ। चलचित्रको नाम ‘डा. सिके राउत’ राखिएको छ।
यो चलचित्रको मंगलबार राजधानीमा एक...
‘प्रेमगीत-३’मा प्रदीप खड्कासँगै राजेश हमाल पनि
काठमाडौं, २ असार। चलचित्र ‘प्रेमगीत–३’ मा राजेश हमाल पनि अभिनेताका रुपमा रहने छन्। ‘प्रेमगीत–३’ का लागि मुख्य कलाकार छनोटको काम चलिरहँदा पुरुष पात्र भने छनोट गरिसकेको हो। मुख्य अभिनेत्रीका लागि निर्माण पक्षले अडिसन लिएर...
नेपाली चलचित्रको हिस्सा बन्न पाएकोमा गर्व लागेकाे छ : सन्नी लियाेनी
काठमाडौं, ३२ जेठ। बलिउड अभिनेतृ सन्नी लियोनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउँदा निकै खुशी महशुस भएको बताएकी छिन्।
पोर्न इन्डस्ट्रीबाट बलिउडमा अभिनय यात्रा थालेकी सनी लियोनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि प्रवेश...
युट्युबबाट एक घण्टामै किन हटाइयो सन्नी लियोन नाचेको नेपाली भिडियो
काठमाडौं, ३० जेठ। बलीउड नायिका सन्नी लियोनले आइटम डान्स गरेको नेपाली गीत युट्युबबाट हटाइएको छ। उनले आइटम डान्स गरेको नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’को ‘आजको साम’ बोलको गीत युट्युबबाट हटाइएको हो।
ओएसआर डिजिटलको युट्युब च्यानलबाट...
काठमाडौं : नेपाली सिने जगतका महानायक राजेश हमालले आफू जतिखेर पनि राजनीतिमा आउन सक्ने बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा हमालले आफू राजनीतिमा जतिबेला पनि राजनीतिकमा आउन सक्ने बताएका हुन्।
पलको फिल्म हेर्न ‘तेरिया’ नेपाल, भन्छिन् फिल्म खेल्ने योजना छैन (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २ जेठ। रिलिज पुर्वसन्ध्यामा ‘वीर विक्रम २’ को ग्राण्ड प्रिमियर सम्पन्न भएको छ। सिनेकर्मीको राम्रो उपस्थिति रहेको रोयल प्रिमियरमा सिनेमाका मुख्य कलाकारले बाजाको तालमा निलो कार्पेटमा सुन्दरता छरे।
पहिलो सन्तान ‘छोरी’ पाउने रहर छ : वर्षा राउत
काठमडौं, २ जेठ। सात वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई अभिनेत्री वर्षा राउत र अभिनेता संजोग कोइरालाले विवाहमा परिणत गरेका छन्।
प्रेमजोडीहरुका लागि निकै महत्वपूर्ण दिन मानिने ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात फागुन २ गते उनीहरुले विवाह...